Maitiro Ekunyora Kudhinda pa Twitter? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 520
Iyo Twitter Mushandisi ine mukana weRekhodi a Kurarama Kurarama neHardware kana Software; Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kutevedzera maitiro aya: Kutanga, enda kune kumisikidza kweshoko rako kana Hardware.
Kamwe mukushandisa kwavo, Mushandisi anoenderera mberi nemaitiro: Sarudza Transmission Server munhu zvichienderana; sarudza Twitter kubva pakudonhedza sarudzo kuti uone iyo encoder neakaunti yako yeTwitter.
Pinda kune yako Twitter account ne Username uye password yeAccount iyo iwe yaunoda kutumira iyo Transmission uye bvuma mvumo. Tevere, inotanga kuendesa vhidhiyo mune yemagariro network Twitter.
Goverana Rarama Rukova kana Replay pa Twitter
Para Goverana Rukova Rarama kana Replay paTwitter, Mushandisi anofanira kuteedzera iwo marongero nemaitiro anowanikwa pane Twitter chikuva kuti aite zvakataurwa chiito; Mupfungwa iyi, inofanira:
Dzvanya paShare icon iri mu chidzitiro chizere Rarama Rarama Vhidhiyo kana Replay; wobva wasarudza imwe yesarudzo idzi: Dzvanya paRarama Kugovana (kana iri Rarama).
O Govera kubva pakutanga (paunenge uchishandisa Dzokorora maitiro); tinya pa Goverana kubva kuTweet, tumira naDirect Meseji kana kuteedzera iyo link yeiyo Live Video kana Replay kubva panguva iyo iyo Mushandisi anosarudza kuburikidza nesarudzo bar.
DZIVIRIRA MUNHU KUTI AONESE UYE KUTAURA PANGUVA YANGU YEMAHARA PA TWITTER
Mushandisi ane mukana wekuDzivirira munhu kubva Ona nekuComment Video yako Rarama pa Twitter; imwe yedzenzira ndeyekuvharidzira munhu iyeye kuti asaite chero chinhu neako Live Vhidhiyo.
Kuvhara munhu, Mushandisi anofanira: Dzvanya pa Mhinduro yako, sarudza yako Mbiri, tinya paGear, sarudza Bvisa mushandisi. Iyo account yemumwe munhu haichakwanise kudyidzana neako Live Mavhidhiyo uye ichavharirwa paTwitter.
Mushandisi semuoni anogona taura zvataurwa iyo yaunofunga seinosemesa uye inoshusha. Kuti uite izvi, sarudza chirevo uye dzvanya paRepota chirevo. Nechiito ichi, hauchazoona mameseji emumwe munhu kune yakasara yeiyo Live Stream
Zvemukati Hazvibvumirwe muPamoyo Mavhidhiyo
Mitemo nemitemo ye Twitter inogadza zvirimo haibvumidzwe muVhidhiyo Yemavhidhiyo, senge: Mavhidhiyo ane mhirizhonga yakajeka, zvemukati zvevakuru kana mifananidzo inovenga inotyora runyararo nekugara zvakanaka kweVashandisi neruzhinji.
Chero Rarama Live iro rakaburitswa nechinangwa che kukurudzira ruvengo pakati pevanhu nekuda kwerudzi, chinamato, hurema, hunhu hwepabonde, dzinza, nyika, nezvimwe.
Twitter ine zero kushivirira ine Live Mavhidhiyo kana zvimwe zvinyorwa zvinopa zvemukati uye mifananidzo inosanganisira kushungurudzwa kwemhando ipi neipi yevana, vachiri kuyaruka uye vechidiki; uye yemhuka dzinoshungurudzwa, dzakakuvara.
1 Goverana Rarama Rukova kana Replay pa Twitter
2 DZIVIRIRA MUNHU KUTI AONESE UYE KUTAURA PANGUVA YANGU YEMAHARA PA TWITTER
3 Zvemukati Hazvibvumirwe muPamoyo Mavhidhiyo